SUSHI 壽司: 六月 2006
If you want to save videos from Google Video and you use Windows, you have the option to download them as GVI files and play with Google Video Player.
If you want to save the videos as AVI and view with any video player on any platform, use this bookmarklet: Google Videos As AVI. You can save it asabookmark in your browser or drag and drop it to the link toolbar. Next time when you seeavideo you like on Google Video, click on the bookmarklet and you can save the video.
download for xp/2000
download for 98
Download Google Videos As AVI Files by Ionut Alex. Chitu
posted by 段德輝 @ 2:06 上午2comments
Your Birth 10000 Days
သင့်မွေးနှစ် သက္ကရာဇ် (ခရစ်နှစ်) လ ရက် ကို ဦးစွာ ဖြည့်လိုက်ပါ ပြီးလျှင် "Push" ကို Click လုပ်လိုက်ပါ ၊ အဲဒီ အချိန်မှာ ခင်ဗျားရဲ့မွေးနေ့ ရက်တစ်သောင်း ပြည့်တဲ့နေ့ ကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ၊ အပျင်း ပြေလေး ကြည့်ကြည့်ပေါ့ ၊ ခင်ဗျားကျော်သွားပြီ လားလို့ ၊ ကျွန်တော် ကတော့၂၀၁၀ခု ၊ သြဂုတ် လ ၆ရက်နေ့မှပြည့်မှာ
posted by 段德輝 @ 8:06 下午 1 comments
ယခုထွက်ပေါ်နေသောUSB အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတော်တော့်ကိုစုံလင်လှပြီ ၊ အဲဒီထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း အတွက်လက်အိတ်နဲ့ ခြေစွတ်နှစ်မျိုး ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် နွေရောက်ပြီခန္ဓာကိုယ်နွေးအောင်လုပ်စရာမှ မလိုတော့တာမဟုတ်လား အခုဒီဟာလေးက ရှေ့ ဆိုနီအင်ဂျင်နီယာKouzi Ichigaya ဒီဇိုင်းပြု ဖန်တီးထားတဲ့ Air Condition အင်္ကျီလေးဘဲပေါ့ ။
ခါးနောက်က၁၀ဆင်တီမီတာရှိပန်ကာအသေးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုကာအင်္ကျီအပြင်ဖက် မှလေကို အတွင်းသို့ စုပ်ယူကာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ချွှေးများကို ထုတ်ပစ်လိုက်သည်ဘ ယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်လို့ သင့်ကိုသင်ကြည့်လိုက်ရင် နဲနဲဖောနေတာကိုကိစ္စမရှိဘူး ဆိုရင် USB နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် AA ဆိုဒ်ဓါတ်ခဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား ။
這個厲害啦～想看正妹的，不用逛網路相簿囉，直接用下面這個網站， 目前出現的 USB 用品琳瑯滿目，其中能「上身」就起碼有手套和拖鞋 兩種。但炎炎夏日，要保暖設備做啥？還是來看看這個由前 Sony 工 程師 Kouzi Ichigaya 設計的 USB 空調衣吧！
藉著腰後的兩個 10cm 小電扇，這種襯衫可以從外面抽風進來，將你身 上的汗水帶走，只留下清爽乾淨的每一天……扯遠了，總之，如果你不 在意看起來臃腫些的話，可以用 USB 為動力，也可以用 AA 電池的 USB 空調衣絕對是你應付不開冷氣的摳門老闆的最佳良伴～
posted by 段德輝 @ 10:32 下午0comments
Inaroom where nobody's love goes
Lock on the lid[?]
Inaroom where nobody [?] goes
posted by 段德輝 @ 5:03 下午0comments
"Crash" ဇာတ်ကားထဲကဇာတ်ဝင်သီချင်းလေးပါ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအားလုံး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကိုလျှော့ပြီး အသားအရောင်မခွဲခြားဘဲ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေ နိုင်ကြရင် အရမ်းကောင်းမှာဘဲနော်
posted by 段德輝 @ 9:45 下午0comments
By Our Country Hero
posted by 段德輝 @ 11:52 下午0comments
posted by 段德輝 @ 9:24 上午0comments
ဒီသီချင်းကိုနားထောင်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်ရစ်နေသေးတဲ့ တရုတ်ကူမင်တန်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်များနှင့်ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ်ရှိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ ကိုသွားပြီးစာ နာဂရုနာသက်မိတယ်၊ သီချင်းရဲ့ စာသားရော သံစဉ်ပါ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲဖို့ ကောင်း တယ် ၊ ခံစားကြည့်ကြပေါ့
Asian's Orphans - Dave Wong
Asian's orphans cry in the wind
Their yellow faces covered with red dirt
Their black eyes filled with white fear
The west wind singsasad song in the east
How many seek the answerless question
How many sign hopelessly in the night
How many wordlessly wipe their tears away
Dear mothers, what does this all mean?
posted by 段德輝 @ 10:08 下午2comments
2006 Taiwan Entrance
၂၀၀၆ခုထိုင်ဝမ်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်း ဇွန်လိုင်လဆန်းပိုင်းတွင် ထိုင်ဝမ်သို့ စတင်ထွက်ခွာနိုင်ပါပြီ
看看有沒有認識的人， 時間過得真是快阿 想一想我自己也來了快三年了
posted by 段德輝 @ 9:56 下午0comments
民主、人權無國界：Free Aung San Suu Kyi，來自台灣NGO的呼籲
今年，我們在6月19日這一天，假Youth Hub舉辦「民主、人權無國界：Free Auug Sam Su Kyi，來自台灣NGO的呼籲」記者會、座談會，以及由學生青年呈現的小型演唱會，表達台灣民間社會對於國際民主運動的支持。
緬甸人民對於民主的渴望，走過政治民主黑暗期的台灣社會必能感同身受，而促進國際民主、人權的發展，更需要來自台灣社會的共同參與，我們的訴求只有一個：「Free Aung Sam Su Kyi」。
posted by 段德輝 @ 9:32 下午0comments
" LMN " new album
01 Myo Gyi - Mee Myarr
02 Layy Phyu - Lann
03 Angae - Nart Meet Mel Main Ma Hla Layy
04 Myo Gyi - Ta Say
05 Layy Phyu - A Pel Khan
06 Angae - Nel Myay Thit Myarr Swar
07 Myo Gyi - Sha Ta Nayt Yet Myarr
08 Angae - A Linn Hnit Myarr
09 Layy Phyu - AWah Yaung Kite Khell
10 Myo Gyi - Pyan Ma Ya Boo
11 Angae - AHmaung Dell Ga TaSeinnMyarr A Kyaung
12 Layy Phyu - Mar Yar
posted by 段德輝 @ 11:12 下午 92 comments
Iraqi Video Details
posted by 段德輝 @ 7:28 下午0comments
"here is wisdom .
Look at me! I'm so annoying! And I'materrible actor, too!
posted by 段德輝 @ 10:06 下午0comments
Jose လို့ ခေါ်တဲ့ programmerတယောက် ပရိဘောဂဝယ်ဖို့ ငွေမရှိသည့်အတွက် “ FedEx ” အမြန်ချောပို့ စက္ကူပုံးနဲ့ နေအိမ်သုံးပရိဘောဂ“စာကြည့်စားပွဲ၊ ကုလား ထိုင်၊ ကုတင် ” ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ တကယ့်ကို ကြံကြံဖန်ဖန်လုပ်တတ်တဲ့ပရိုဂရမ်မာ
posted by 段德輝 @ 4:59 下午0comments
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လူဖြူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် အသက် ၆နှစ်ရှိသောသူ့ သားငယ်နဲ့ အတူခရီးဝေး တစ်ခု ထွက်ဖို့ အတွက် တက္ကစီတစ်စင်းငြားလိုက်သည်ဒ ရိုက်ဘာက လူမည်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်၊
ဒီအသက်၆နှစ်သားလေးဟာ လူမည်းကို တစ်ခါမျှမမြင်ဖူး သောကြောင့် ကြောက် ကြောက်နဲ့ အမေ့ကိုမေးသည် “မေမေ ဒီလူ လူဆိုးလား? ရုပ်ကမည်းတူးတူးကြီးနဲ့ ” လူမည်းကြားပြီးတော့ လွန်စွာပင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားသည်။
အဲဒီအချိ်န်မှာဘဲလူဖြူအမျိုးသမီးက“ ဒီဦးလေးကလူစိုးမဟုတ်ဘူးသူကလူကောင်း ” သားလေးကခဏ တွေဝေပြီး ပြန်မေးလိုက်သည် “ တကယ်လို့ သူလူဆိုး မဟုတ်ဖူး ဆိုရင် သူတစ်ခုခု လုပ်မှားမိလို့ ဘုရားသခင်က သူ့ ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးနေတာလား?” လူမည်းမျက်လုံး ထဲတွင် မျက်ရည်များ လည်နေတော့သည်။ သူက အမျိုးသမီး ဘာ ပြန်ဖြေမည် ကိုသိချင်နေသည်။
မေမေက “ ဒီဦးကလူဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူး မကောင်းတာလည်းမလုပ်ဘူး၊ ဒို့ အိမ်ပန်း ခြံမှားလည်း ဖြူနီ ပြာ ဝါပန်းတွေ ပွင့်နေတယ် မဟုတ်လား ”
“ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ”
“ ပန်းရဲ့ မျိုးစေ့က အမည်းရောင် မဟုတ်လား? ” ကလေးကခဏစဉ်းစားပြီး “ ဟုတ်တယ်၊ အနက်ရောင်တွေ ”
“ မျိုးစေ့က အနက်ရောင် ပွင့်လာတဲ့ပန်းက အရောင်စုံပန်းပွင့် ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုဝေ ဆာစေခဲ့ တယ်မဟုတ်လား ”
“ ဟုတ်တယ် ” သားဖြစ်သူက “ ဒီဒရိူက်ဘာဦးဦးက လူဆိုးမဟုတ်ဘူး၊ ဦးက ဒီကမ္ဘာ ကြီးကို ဝေဆာစေတဲ့ အတွက်အရမ်းဘဲ ကျေးဇူးတင်တာ၊ ဦးအတွက် ဆုတောင်းပေး မယ်နော် ”
စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ကလေး ကနှဘေးမှာငုတ်တုတ်ဆုတောင်းနေတော့သည်။ လူမည်း ဒရိုက်ဘာကလည်းနှဘေးတွင်မျက်ရည်ကျကာစဉ်းစားမိသည် “ ငါလူမည်း ဖြစ်သော ကြောင့်လူအများက ငါ့ကိုအထင်သေးခဲ့ကြသည်၊ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ ဒီလူဖြူအမျိုးသ မီးက သူ့ သားကိုမကြောက်အောင် ဒီနည်းနဲ့ ဆုံးမကာ သူ့ အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ သောကြောင့် သူ့ ကိုအထူး ကျေးဇူးတင်ရ မည်။ ”
ထိုစဉ် ခရီးဆုံးပြီဖြစ်သောကြောင့် လူမည်းဒရိုက်ဘာကကားပေါ်မှ လျှင်မြန်စွာဆင်း ပြီး ကားတံခါး ဖွင့်ပေးပြီး “ အန်တီ အန်တီကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်၊ သင်ရဲ့ စကား တခွန်းကြောင့် ကျွန်တော့် ဘဝအမှောင်ဘဝကနေ အလင်းရောင်ရရှိခဲ့ပါတယ၊် ကျေး ဇူးတင်ပါတယ် ”
အရမ်းလှပတဲ့ အမျိုးသမီးဘဲ မဟုတ်လား? ဒါက အမေရိကားမှာ တကယ့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ပထမဆုံးကြားလိုက်ချိန်မှာအိပ်မောကျနေတဲ့စိတ်ကို လှုပ်နိုး နိုင်ခဲ့သလို၊ နာကျင်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းနွေးထွေးစေခဲ့ပါတယ်။
posted by 段德輝 @ 4:22 下午0comments
အခုတလောရန်ကုန်အနီးတဝိုက်ကနေအိမ်တွေမှာဧည့်စာရင်းစစ်ဖိုလွယ်ကူစေရန် အတွက် အိမ်တိုင်း၎x၆ဆိုက်ဓါတ်ပုံချိတ်ရမယ်လို့ကြေငြာထားတယ်ကြားရတယ်
緬甸軍事政權為加強監督老百姓，要求仰光附近住家，把家人 照片掛在牆上，方便警方檢查。緬甸原本就有戶口制度，就是 每戶要有戶口本，每戶人家不得隨意讓外人留宿，如果留宿， 必須向警方登記。現在緬甸為加強對人民監督，防止有人窩藏 壞人或反政府人士，要求仰光附近每戶人家，必須把家人照片 放大成４x６英吋照片掛在牆上，方便警察臨檢。
posted by 段德輝 @ 1:56 下午0comments
well done Download Google's Blog Apple Trailer Google System NewIdea NCCU Guitar Learning Online Translator Free Resource
Myanmar tea shop
Online TV FTVN PPStream Daily Motion Pyro Tv TuDou Stage6 PronoTube Allsp HotLinK YourDailYmOtion
Help Burmese People !!!
Cell Phone's secret u must be know
After Nargis photo collection
Donate " MYANMAR "
MDY FM with April fool day